Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / In la codsado magan-gelyo / Maxaa raad ku yeesha fursadaha in la helo sharci daganaansho?
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 5 7 2021
Codsi magan-gelyo oo kasta waxaa loo eegaa si gaar ah. Tani micnaheedu waa in Hey'adda Socdaalka ay baari doonto sababta aad magan-gelyo uga codsatay Iswiidhan.
Waa muhiim inaad sheegto runta oo aanad baddelin sheekadaada. Tani waxay raad ku yeelan kartaa haddii aad helayso sharci ama aanad helayn.
Qaramada midoobay qaraarkeeda carruurta waxaa ku qoran waxa shuruud u ah in qof lagu sheego qaxoonti. Qaxoonti ahaan waxaad helaysaa sharci degganaansho oo ansax ah saddex sano.
Adiga waxaa laguu arkaa qaxoonti haddii Hey'adda Socdaalku qiimeyso inaad leedahay sabab si fiican ugu salaysan inaad ka cabsanayso dhibaato lagu gaysto oo ay sabab u tahay:
Haddii aad weli baahi u qabto gabbaad saddex sano ka dib, waxaad heli kartaa dheereynta sharciga degganaanshada. Sharci degganaansho oo la dheereeyay wuxuu ansax yahay laba sano. Saddex sano ka dib waxaad xitaa fursad u haysataa inaad codsato sharci degganaansho oo joogto ah.
Midowga Yurub waxay wadajir u leedahay qawaaniin ah waxa shuruud u ah in qof loo arko qof u baahan badbaado kale. Markaad tahay qof u baahan badbaado kale waxaad heli kartaa sharci degganaansho oo ku meel gaar ah oo ah 13 bilood.
Haddii aad weli baahi u qabto gabbaad 13 bilood ka dib, waxaad heli kartaa sharci degganaansho oo la dheereeyo.
Magan-gelyo doonka xaalado dhif iyo naadir ah waxay heli karaan sharciga deganaanshaha inkastoo aan iyaga lagu qiimeyn inay yihiin qaxoonti ama heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo.
Ka reeban xaqa in la helo magan-gelyo
Adigu Iswiidhan ma ka heli kartid magan-gelyo haddii adigu aad:
Ku kacday dembiyo dagaal.
Ku kacday dembiyo dagaal oo ka soo horjeeda bini'aadnimada.
Ku kacday dembi halis ah oo kale.
Khatar ku tahay amaanka Iswiidhan.
Haddii aad khatar ugu jirto in lagu dilo ama dhibaato laguugu gaysto dalkaaga waxaad heli kartaa sharci daganaansho oo ku meel gaar ah xitaa haddii aad geysatay mid ka mid ah ficilada ku jira liistadan.
UR Skola ayaa samaysay filim sharaxaya farqiga u dhaxeeya erayada qaxoonti iyo heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo. Filimkan waa af iswiidhish. Wuxuu leeyahay qoraalyo hoosta ah oo ah iswiidhish, carabi, kurdi, faarsi, soomaali iyo tigrinya.
Dheeraad ku saabsan qawaaniinta magan-gelyada ka akhriso bogga Hey'adda Socdaalka.